Matongerwo eNyika, 28 Nyamavhuvhu 2018
Chipiri 28 Nyamavhuvhu 2018
Nyamavhuvhu 28, 2018
VekwaCharumbira Vopengera Hurumende Zvichitevera Hurongwa hweKugadza VaTafirei Bere huMambo kuMasvingo
Masabhuku abatana nevagari vemunharaunda yaIshe Charumbira vachiratidzira pamahofisi yegurukota reMasvingo, vachitsutsumwa nedanho rakatorwa nehurumende rekugadza Ishe Bere avo vavanoti vari kuvatorera nzvimbo yavo yavakasiirwa nemadzitateguru avo.
Mutungamiri weBritain Onyenyeredza Zimbabwe Murwendo Rwake kuAfrica
Mutungamiri wehurumende yeBritain, Amai Theresa May, vanyenyeredza Zimbabwe mukushanya kwavari kuita kekutanga muAfrica kubva zvavakapinda mumasimba muna 2016
Vakuru veMabhizimisi Voronga Musangano naVaMnangagwa Apo Nyika Yotarisanazve neNzara
Vakuru vemabhizimisi munyika vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kuti vagadzirise nyaya dzezvehupfumi apo vemamiriro ekunze vari kuyambira kuti Zimbabwe yatarisanazve neimwe nzara zvichikonzerwa nekusanaya zvakakanaka kwemvura.
Masangano eVagari Anoburitsa Gwaro reMashandisirwo eMari neMakanzuru
Chirongwa ichi chinokuridzira kushandiswa zviri pachena kwemari dzinobhadharwa nevagari mumaguta anosanganisa Bulawayo, Gweru, Harare, Masvingo neMutare.
Nyanzvi Dzotarisisa Kupiwa Mvumo kweZTV Kuti Iburitse Zvaiitika kuDare reConstitutional Court
Apo nyika iri pakati pekuzeya zvakaturwa nedare reConstitutional Court, vamwe vari kutarisisa mafambisirwo akaita nyaya yekutepfenyurwa kwezvaiitika mudare nezvazvinoreva kana kuchitariswa kodzero dzekufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa.
Vamwe Vagari vekuMashonaland West Vanoti Vabuda muMweya weSarudzo
Vagari ava vanoti hapana chichashanduka pane zvakabuda musarudzo uye nekumatare nekudaro vave kuenderera mberi nekurarama uko vanoti kuri kurwadza.
Vadzidzisi VekuMaruwa Vanoti vaveKushungurudzwa neVasori VeCIO
Sangano revadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, rinoti raudza magweta aro kuti vafambise nyaya yekutyisidzirwa kwavari kuitwa nevanofungidzirwa kuti vasori veCIO.
Harare Agriculture Show Yegore Rino Yovhurwa
Kuratidzirwa kwezvirimwa, mabhizimisi nemamwe mabasa paHarare Agricultural Show kwakatanga nemusi weMuvhuro muHarare vanoronga showa vachikurudzira veruzhinji kupinda muchiitiko ichi kuti vawane mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima.
Harare Agriculture Show Yotanga
Kuratidzirwa kwezvirimwa, mabhizimisi nemamwe mabasa paHarare Agricultural Show kwatanga nhasi muHarare vanoronga showa vachikurudzira veruzhinji kupinda muchiitiko ichi kuti vawane mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima.
VaJohn McCain Votarisira Kuradzikwa kuMarinda eMauto kuAnnapolis
Mhuri yeAmerica iri kuenderera mberi ichichema Senator John Mccain avo vakashaya nechirwere chegomarara musi weMugovera.
Kushomeka kweMapiritsi eTB Kwoisa Hupenyu hweVarwere muNjodzi
Vanhu vanechirwere cherurindi vanoti vave kutyira hutano hwavo zvakanyanya sezvo mapiritsi ekurapa chirwere ichi ari kushomeka.